Ka oge okpomọkụ ahụ na-eru nso ụmụaka na ndị okenye nwere ike ịṅụrị ọṅụ na atụmanya nke oge ezumike. N'ụlọ akwụkwọ na kọleji na-emechi maka oge okpomọkụ, gịnị dị mma karịa ịga ezumike na ndị mechiri emechi gị. Ọ dịkarịghị mfe ị ga-aga ebe na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ. Ọ gwụla ma ọ bụ Goa! Ugwu elu na obodo niile bụ ebe kachasị mma ị ga-aga na ọkụ a.
Ebe kacha mma ị ga-esi na-ehi ụra bụ ugwu ugwu. N'ịdị jụụ ma dị jụụ, okpomọkụ okpomọkụ adịghị emetụ gị aka n'ebe ahụ ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị nne mara mma n'ebube ya niile. Maka njem dị mkpirikpi ma dị jụụ, ị nwere ike ịme atụmatụ nleta na Lonavala na Khandala dị na Maharashtra. Ịdị nwayọọ na nke dị jụụ, ị ga-enweta ntụrụndụ ị na-achọ! Maka njem na ezinụlọ gị ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya, ịga n'elu ugwu ga-abụ nhọrọ kacha mma. Ịchọgharị ndagwurugwu ndị mara mma, ịzụ ahịa, ịgagharị n'okporo ụzọ na ụzọ ụkwụ bụ ihe i nwere ike ime ebe a. Maka njem ọzọ na-adọrọ mmasị gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ihe dị mma karịa okporo ụzọ na-aga Leh Ladakh. Ịga n'ụgbọala gị, na-eri nri n'akụkụ okporo ụzọ dhabas, ịgagharị na ịnyagharị n'ụzọ niile. Kedu ihe ọzọ mmadụ nwere ike ịrịọ maka ezumike!
Ndị e depụtara n'okpuru bụ nchịkọta ole na ole anyị nyere dị ka Srinagar Tour Package, Best Kashmir Tours packages, Leh Ladakh Tour Package, Njem na Lonavala - Khandala nke ga-eme ka mkpebi ezumike gị dịkwuo mfe. Jide n'aka na ị ga - ahọrọ kacha mma! Obi ụtọ na-eme njem!
Njem gaa na Himachal zoro ezo na Ngalaba Ochie Ndụ
Ex-Chandigarh Himanchal Tour ngwugwu
Chọpụta Ufọkaazụ Mgbasa Ozi na Uttarakhand
Mma nke Nature Tour ngwugwu
Njem na Himachal Zoro ezo
Himalaya Glory Tour Package
Ihe omimi nke Himachal
Himachal ama ama
Leh-Ladakh na Srinagar
Njem Ochie Kashmir
Ezumike na Karnataka na Tamil Nadu